चार वेदमा के छ हेर्नुहोस् – newskiran.com
Posted By : newskiran.com Posted On : 2020-07-05 12:29 pm Posted On : 2020-07-05 12:29 pm
२१ असार २०७७ काठमाडौं। वेद किन पढ्ने, चारवटा वेदमा के छ त्यस्तो ?
ब्रह्म के हो ? जीव के हो ? आत्मा के हो ? ब्रह्माण्डको उत्पत्ति कसरी भएको थियो ? ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम यी सबै विषयहरुको विस्तृत व्याख्या वेदमा गरिएको छ । भौतिक विज्ञान अहिलेसम्म यस क्षेत्रका बारेमा सामान्य जानकारी मात्र प्राप्त गर्न सकिरहेको छ । वेदमा आध्यात्मिक ज्ञानका साथ–साथ विज्ञान, कला, संगीत तथा आयुर्वेदको ज्ञान पनि छ । सबै वेद संस्कृत भाषामा रचना गरिएको छ । वेद चार प्रकारका छन् ।
अथर्व वेदको रचना अथर्व ऋषिले गरेका थिए । अथर्ववेदको भाषा तथा स्वरुपका आधारमा यस्तो मानिन्छ कि यो वेदको रचना सबैभन्दा अन्तिममा गरिएको थियो । यज्ञ र देवतालाई वेवास्ता गरेका कारण वैदिक पुरोहित वर्ग यसलाई अन्य तीन वेदको बराबर मान्दैनन् । यसलाई यो दर्जा निकै पछि प्राप्त भएको थियो । किनकी यो वेद एक ऋषिद्वारा रचित हो र केही कुरा खरा छन् । अथर्ववेदमा कुल २० काण्ड ७३० सुक्त एवं ५९८७ मन्त्र छन् । जसमा ब्रह्मज्ञान औषधि प्रयोग रोग निवारण जन्त्रतन्त्र, टुनामुना आदीवारे विस्तृत वर्णन गरिएको छ ।
नेपालले सच्चा नेपालको नक्सा पाउँदै:भूसाल
2020-06-14 newskiran.com 0